Xasan Shiikh oo ka qeyb galaya Shirka Madaxa Midowga Africa |
Xasan Shiikh oo ka qeyb galaya Shirka Madaxa Midowga Africa
zoloft tablets buy, generic dapoxetine. Madax badan oo ka tirsan ururka Midowga Afrika ayaa waxa ay gaarayaan magaalada Addis Ababa,waana midkii 24-aad ee kulama madaxda Midowga Africa waxana uu socon doonaa 23-ka ilaa iyo 31-ka bishaan,sanadkaan waxaa diirada lagu sari doona awooda haweenka iyo sidii loo taageri lahaa.
Shirka sanadkaan waxyaabaha looga hadlaayo waxaa qeyb ka ah xadeenta xagjirnimada oo ay tilmaamtay madaxa Midowga Africa Naksusana Suma in ay ku baahayso qaarada Africa taasi oo ay sheegtay in ay handadaayso amaanka iyo xasiloonida Africa.
Suma waxa ay soo hadal qaaday dalka Soomaaliya iyo hanjaabada dhaq dhaqaaqa Al-shabaab,waxa ay boorisay ciidamada midowga Afrika ka socda eek u howlgalaya magaca AMISOM.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku biiri doona saacadaha soo socda madaxda ku qul qulaysa magaalada Addis ababa,maanta waxa la filayaa in halkaasib uu gaaro madaxweynaha dalka Masar Cabdifitaax Al sisi.